नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : धन जनको ठुलो क्षति हुँदैछ अमेरिकामा । अब साँझ पर्दैछ र हुरिकेन झन बढ्दो छ, आज रातभरीमा कती को ज्यान जाने हो, कती घरबार बिहिन हुने हुन अनुमान गर्न गार्हो छ, इमर्जेन्सी लागिसकेको छ !
धन जनको ठुलो क्षति हुँदैछ अमेरिकामा । अब साँझ पर्दैछ र हुरिकेन झन बढ्दो छ, आज रातभरीमा कती को ज्यान जाने हो, कती घरबार बिहिन हुने हुन अनुमान गर्न गार्हो छ, इमर्जेन्सी लागिसकेको छ !
अमेरिकामा अहिले आइरहेको हुरिकेन स्यान्डिले गर्दा आज घर बाट बाहिर निस्किन सकिएन, के गर्ने ज्यान को माया मार्न नसकिंदो रहेछ । अहिले एकाएक हावा हुरी र पानी बढेको छ, बाहिर रुखका हाँगा हल्लिएको देखेर झन डर पो लाग्न थाल्यो । अमेरिका सँग सीमा जोडीएका केही स्थानमा स्यान्डिले हाल सम्म ६७ जनाको ज्यान गैसकेको छ भने केही बेपत्ता छन । धन जनको ठुलो क्षति हुँदैछ अमेरिकामा । अब साँझ पर्दैछ र हुरिकेन झन बढ्दो छ, आज रातभरीमा कती को ज्यान जाने हो, कती घरबार बिहिन हुने हुन अनुमान गर्न गार्हो छ । इमर्जेन्सी लागिसकेको छ । करीब सात लाख मान्छे को घरमा बिजुली गैसकेको छ । उनिहरु अन्धकार मा छन । स्कुल, कलेज्, यातायात, ट्रेन, हवाइ यातायात सबै चौपट । दश हजार फ्लाइट क्यान्सिल भैसकेका छन । ठाउँ ठाउँ मा बाढि आएको छ । करिब चार लाख मानिस घर छोडेर शिबिर तिर सरेका छन । १३ वटा राज्यको संकट काल अन्यत्र पनि सर्न थालेको छ । अहिले सम्म त हामी बसेको ठाउँ मा बिजुली गैनसकेकोले यो समाचार अपलोड गरिदैछ, यस्तै चाल हो भने कतिखेर देखी हाम्रो पनि संपर्क टुट्छ थाहा छैन । भगवान सँग प्राथना गर्दै बस्नु को कुनै बिकल्प छैन ।